साप्ताहिक राशिफल : आज माघ २७ गतेदेखि आउँदो फाल्गुन ४ गतेसम्म तपाईका दिन शुभ-अशुभ कस्तो रहला ? – PathivaraOnline
Home > राशिफल > साप्ताहिक राशिफल : आज माघ २७ गतेदेखि आउँदो फाल्गुन ४ गतेसम्म तपाईका दिन शुभ-अशुभ कस्तो रहला ?
admin February 10, 2019 राशिफल 0
• डा. उत्तम उपाध्याय न्यौपाने – Dr. Uttam Upadhyaya Neupane
यस हप्ताको राशिफल
(माघ २७ गतेदेखि फाल्गुन ४ गतेसम्म)
यो साता काममा उन्नति, प्रगतिका योगहरू बन्नेछन्। पारिवारिक एवम् दाम्पत्य सुख, शान्ति, समृद्धि मिल्ने देखिन्छ। देशविदेशको योग बन्न सक्नेछ। विद्या, बुद्धि बढ्नेछ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने साता रहेको छ। बिहीबार र शुक्रबार केही नचाहिँदा झुटा आरोप, प्रत्यारोप लाग्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। नयाँ कार्यको आरम्भ आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार वा बुधबार गर्दा निकै राम्रो देखिन्छ।
यो साता वृष राशिको लागि निकै राम्रो देखिन्छ। रोकिएका काम बन्नेछन्। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि निकै राम्रो देखिन्छ। पारिवारिक सुख, शान्ति, समृद्धि मिल्नेछ। उन्नति, प्रगति हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा केही अप्ठ्यारा पक्षहरू आए पनि सल्टिएर जानेछन्। कृषि क्षेत्रमा लाभ छ। खेलाडीहरूका लागि साता मध्यम छ। लेनदेनमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक उपार्जनका बाटाहरू प्रशस्त मिल्नेछन्। सवारी साधन र यात्रामा विचार पुऱ्याउनुहोला। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने देखिन्छ।
आर्थिक उपार्जन र समृद्धिको साता रहन सक्नेछ। व्यापार, व्यवसायमा लाभ छ। नयाँ घर, जग्गाजमिनको योग बन्न सक्नेछ। स्वास्थ्यमा थोरै समस्या देखापर्ला। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्र सामान्य देखिएको छ। कमाइ र उन्नति, प्रगतिमा ग्रहले निकै राम्रो साथ दिएको छ। घरपरिवारबीचको सम्बन्ध र साथ धेरै हदसम्म राम्रो देखिएको छ। साताको बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार नयाँ कार्यको थालनी गर्नुभयो भने धेरै राम्रो योग बन्ने देखिन्छ। यो साता हरियो, खैरो, सेतो, क्रिम र निलो रङ लगाएर काम गर्दा राम्रो हुनेछ। यो साता ३ र ५ शुभ अङ्क रहेको छ।
साता मध्यम छ। रोकिएका काममा अझै बढी अप्ठ्यारा पक्षहरू रहनेछन्। विद्या, बुद्धि बढ्नेछ। यात्रा मध्यम छ। आर्थिक पक्षमा केही व्यवधान नरहला भन्न सकिन्न। स्वास्थ्यमा केही सुधार आउनेछ। यो साता बुधबार र बिहीबार पुरस्कृत हुने योग छ। सवारी साधनहरूमा भने ख्याल गर्नुपर्नेछ।
यो साता अचानक लाभ मिल्नेछ। विद्या, बुद्धि बढ्ने देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा लाभ छ। खेलाडीहरूका लागि साता उत्कृष्ट छ। बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि साता मध्यम देखिएको छ। पत्रकारिता र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि निकै राम्रो देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने साता रहेको छ। व्यापार, व्यवसायमा निकै राम्रो छ। १, ३ र ५ शुभ अङ्क राखेर काम गर्नुहोस्। सूर्यको दर्शन सातै दिन गर्दा राम्रो हुनेछ।
मानसिक अशान्ति र पीडा रहला। अचानक स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन सक्नेछ। आर्थिक पक्षमा पनि समस्या आउन सक्नेछ। कृषि क्षेत्रमा लाभको साता छ। मनमा उत्साह र उमङ्ग बढ्नेछ। दाजुभाइ, परिवार र इष्टमित्रबीचको माया, प्रेम र सद्भाव निकै राम्रो देखिएको छ। घरपरिवारबीचको सम्बन्ध र सहकार्य पनि धेरै राम्रो देखिन्छ। प्रेमीप्रेमिकाबीच केही कटुताका योगहरू रहलान्। अचानक यात्रा हुन सक्नेछ। देशविदेशबाट खुसीको खबर सुन्न पाउनुहुनेछ। साथै हजुरले गर्न खोज्नुभएको काममा राम्रो हुने देखिन्छ।
सन्तान सुख, शान्ति मिल्न सक्नेछ। कृषि क्षेत्रमा लाभको साता देखिन्छ। यात्रा मध्यम छ। नयाँ सवारी साधनको योग देखिन्छ। मातापिताको स्वास्थ्यमा निकै सुधार आउने देखिन्छ। आफ्नो कार्यमा भने केही अड्चन देखिनेछ। न्याय क्षेत्रबाट न्याय पाउन सक्ने देखिन्छ। पारिवारिक दिनदशा राम्रो देखिन्छ।
नँया कार्यको थालनी हुनेछ। लेनदेनमा केही समस्या आउला। व्यापार, व्यवसायमा लाभ छ। उत्साह र उमङ्ग बढ्नेछ। दाजुभाइ, परिवार र इष्टमित्रबाट सहयोग मिल्नेछ। कुलकुटुम्बको सहयोग अपरिहार्य रहनेछ। नयाँ सवारी साधनको योग बन्न सक्नेछ। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा सामान्य लाभ छ। खेलाडीहरूका लागि साता मध्यम छ। विद्या, बुद्धि बढ्ने देखिन्छ।
आय आर्जन प्रशस्त बढ्ने देखिन्छ। पारिवारिक क्षेत्रमा केही अप्ठ्यारा रहन सक्नेछन्। सवारी साधनमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। नयाँ कार्यको थालनी र नयाँ व्यक्तिसँग परिचय हुनेछ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने देखिन्छ। व्यापार, व्यवसायमा मध्यम लाभ छ। देशविदेश जाने ठूलो इच्छा र आकांक्षा पनि यो साता बोक्न सक्ने अवस्था छ। राजनीतिकर्मीका लागि यो साता मध्यम छ। दाम्पत्य जीवनमा भने खर्च बढ्ने साता रहेको छ। यो साता पहेँलो, सेतो, निलो रङ लगाएमा राम्रो हुने देखिन्छ।
व्यापार, व्यवसायमा लाभ छ। मनमा उत्साह र उमङ्ग बढ्नेछ। लेनदेनमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा केही समस्या रहला। दाम्पत्य जीवनमा केही समस्या रहन सक्नेछ। राजनीतिक एवम् सामाजिक क्षेत्र मध्यम छ। आर्थिक उपार्जन र उन्नति, प्रगति राम्रो देखिन्छ। सवारी साधनमा लाभको साता छ। खानपानमा धेरै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ।
मनमा उत्साह र उमङ्ग बढ्नेछ। विवाहमा सरिक हुने साता छ। साथीभाइबाट धेरै सहयोग प्राप्त हुनेछ। देशविदेशबाट खुसीको खबर मिल्नेछ। खेलाडीहरूका लागि साता मध्यम छ। साहित्य, सङ्गीतमा लगावको साता रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि केही अप्ठ्यारा पक्षहरू रहनेछन्। सवारी साधनमा विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ। कृषि क्षेत्र मध्यम छ। लेनदेनमा भने राम्रो देखिएको छ।
यो साता निकै सुखद बन्नेछ। रोकिएको काम बन्ला। आर्थिक उपार्जनका प्रशस्त मार्गहरू रहन सक्नेछन्। न्याय क्षेत्रबाट उचित न्याय प्राप्त हुनेछ। बैंकिङ क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा मध्यम छ। छात्रछात्राहरूका लागि साता सामान्य देखिएको छ। दाजुभाइ, परिवारबीचको प्रेम र सद्भाव बढ्नेछ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने साता रहेको छ। यात्रा सुखद छ। देशविदेशबाट खुसीको खबर सुन्न पाउनुहुनेछ।
सरस्वतीलाई चढाइएको ७ गेडा अक्षता दाँतले नछोई निलेमा विद्या र बुद्धि स्फुरण हुने धार्मिक विश्वास
०७८ साल साउन ३० गते शनिबार, हेर्नुहाेस् तपाइँहरूकाे राशिफल अनुसारकाे भाग्यफल यस्तो छ!